Umenzi weevenkile eziHanjiswa ngenqwelomoya oThengisa iimpahla Ngexesha
Ixesha lexesha laseGuangzhou
Ukuhanjiswa okukhawulezayo kumazwe angaphandle ngesikhephe ...
Ihowuliseyili abathengisi bezisombululo zomoya-Express ...
100% yemithwalo yoqobo Euro-2019 kwizinga eliphezulu C ...
Isitshayina ethengisa iChina kwi-USA-Express-O ...
Ihowuliseyili fdlx ntengiso jikelele ...
Ngaba ukukhetha kwethu kunye nokupakisha kuncede njani abathengi? Sinikezela ngeenkonzo zephakheji epheleleyo yokuhlangabezana neemfuno zakho zeshishini! I-99.6% ichola inqanaba lokuchaneka elidityaniswe ngokupheleleyo kwiwebhusayithi yakho kwaye ithengise ...
Ngaba ukukhetha kwethu kunye nokupakisha kuncede njani abathengi?
Sinikezela ngeenkonzo zephakheji epheleleyo yokuhlangabezana neemfuno zakho zeshishini!
Olona khetho lukhethwayo kuninzi lwabathengi bethu kukuvumela ukudityaniswa kwe-API yeNkqubo yethu yoLawulo lweeNdawo zokuGcina (WMS) kunye namaqonga okuthengisa abawasebenzisayo okt Shopify, Amazon, Magento, WooCommerce njl. ukuthumela.
Siyazingca kakhulu kumgangatho wokuchaneka kokuchaneka okugqibeleleyo. Sisebenzisa itekhnoloji ye-barcode ukukhetha ii-odolo kwaye iqela lethu lifumana uqeqesho olubanzi kwaye iiodolo zihlala zijongwa kabini ngaphambi kokuhambisa.
Sigcina ukhetho olubanzi lwezinto zokupakisha kubandakanya iintlobo ngeentlobo zeebhokisi, iimvulophu ezinamabala kunye nesikhuselo sembombo. Iqela lethu linamava amaninzi okuqinisekisa ukuba zonke iimpahla ezithunyelwayo zipakishwe ngokufanelekileyo, zinophawu oluchanekileyo ngolwazi lwenkampani yakho kwaye naziphi na izinto ezongezelelweyo zokuthengisa / ukufakwa kufakiwe.
Wamkelekile ukuba ubonelele ngokupakisha kwakho, okanye sinokukunceda ukuba upakishe uphawu lwakho eChina ngokweemfuno zakho.
Abanye babathengi bethu bayabandakanyeka kuthengiso lweevenkile kwimpahla yabo kunye nokuthengisa kweAmazon FBA. Sinamava ekupakisheni ii-odolo ezixineneyo.
Xa abathengi bedinga izinto ezahlukeneyo (i-SKU) ukuze zithunyelwe kunye, sinokuzicwangcisa ngokulula nangokuchanekileyo ezi-odolo kwaye sicebise ngeyona ndlela yokuhambisa isebenzayo kulo naliphi na ilizwe elisinge kulo.
Ukukhetha iodolo ngexesha elifanelekileyo kunye nokuhambisa kubalulekile kwi-e-commerce. Singakhetha, sipakishe kwaye sithumele zonke iiodolo ozifumanayo ngaphambi kwentsimbi ye-4: 00 emva kwemini eBeijing kwangolo suku, ukuze uzithumele kwihlabathi liphela ngejelo lokuhambisa olikhethileyo.
Egqithileyo Ukuhanjiswa koololiwe
Okulandelayo: Uloyiko lomoya
Idlulisela iNkonzo yeFedEx isuka e China iye kwiFed Ex Sh ...
Idilesi: Ixesha lexesha laseGuangzhou
Abathengisi bezenzululwazi baxoxa ngezibonelelo zeF ...
Uloliwe omtsha oya eYurophu
Amaxhoba e-FedEx wokudubula afumana u-fundi ...
Inombolo yepakethe yokubuza
Nceda ufake inombolo yakho yephakheji